‘किन सिडिओसाब सँग झुट बोले इलाम जिल्लाका एक मेयर साबले !!!’ – Green Ilam
‘किन सिडिओसाब सँग झुट बोले इलाम जिल्लाका एक मेयर साबले !!!’
in कोरोना अपडेट, मुख्य समाचार, समाज
असार १५, इलाम : विदेशबाट नेपाल आएकाहरुलाई चारालीबाट इलामसम्म ल्याउने गाडीको व्यवस्थापन र कोरोना संक्रमितहरुलाई ओसारपसार गर्न एम्बुलेन्सको प्रभावकारी सञ्चालनका लागि सरोकारवालाहरुलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय इलामले आइताबार बैठक बोलाएको थियो । बैठक कक्षमा प्राय सरोकारवालाहरु सबै भेला भईसकेपनि इलामका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तुलसीराम सेढाई, सहायक प्रजिअ मोहन प्रसाद न्यौपाने, प्रहरी प्रमुख नविनराज राई लगायतका जिल्ला सुरक्षा समितिका पदाधिकारीहरु फोन र आन्तरिक कोरोना नियन्त्रण तयारीमा ब्यस्त रहे ।
साझ ४ बजे बोलाईको बैठकमा कक्षमा उपस्थित भएका सबै सरोकारवालाहरुमाझ नै उनीहरुको व्यस्तता अस्तव्यस्त थियो । इलामको माई नगरपालिकाका प्रमुख दिपक थेवेसँग उनीहरु फोनमा कुराकानी गरिरहेका थिए । प्रजिअ सेडाईको मोवाइल लाउडस्पिकरमा थियो । प्रजिअ सेडाईले थेवेलाई पिसिआर रिपोर्ट नै नआई कसरी क्वारेन्टाईनमा भएका २५ बर्षिय युवकलाई छाड्नुभयो भनेर प्रश्न गरे । शनिबार कोशी अञ्चल अस्पतालले भारतबाट आएका एक २५ बर्षिय युवाको समेत रिपोर्ट नेगेटिभ भनेर पठाएकोले माई नगरपालिकामा रहेको क्वारेन्टाइनबाट छाडिएको तर आईतबार कोशी अञ्चल अस्पतालले पुन ती व्यक्तिको रिपोर्ट पोजेटिभ भनेर पठाएको बताए । सिडिओ सेडाईले कहानिर गल्ती भयो ? के कोशी अञ्चल अस्पतालले शुक्रबार पठाएको रिपोर्ट तपाई आफैले हेर्नुभएको हो ? भने र प्रश्न गरे । उताबाट मेयर थेवेले आफैले हेरेको बताए । माई नगरपालिकाको क्वारेन्टाइनमा रहेका सबैको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको कोशी अञ्चल अस्पतालबाट जानकारी आएपछि स्वाब संकलन गरिएका सबैलाई शनिबार छोडिएको उनले सिडिओलाई जानकारी गराए । सिडिओ सेडाईले अस्पतालले यस्तो गल्ती नगर्नुपर्ने भन्दै जताबाट भएपनि भईसकेको गल्तीका कारण समुदायमा कोरोना फैलिने चिन्ता व्यक्त गरे । उनले मेयर थेवेलाई तत्काल संक्रमितसँगको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरि कन्ट्याक्टमा आएकाजतिलाई क्वारेन्टाईनमा राख्न अनुरोध गरे ।
बैठकमा उपस्थित भई लाउडस्पिकरमा भएको सिडिओ र मेयरविचको बार्ता सुनिरहेका इलाम अस्पतालका प्रमुख डाक्टर प्रभु शाहले अस्पतालले यस्तो गल्ती नगर्नुपर्ने आशंका व्यक्त गरे । उनले तत्कालै कोशी अञ्चल अस्पतालबाट रिपोर्ट मगाए । रिपोर्ट हेर्दा थाहा भयो, मेयर थेवेले सिडिओलाई ढाटेका रहेछन् । शुक्रबार आएको पिसिआर रिपोर्टमा संक्रमित व्यक्तिको रिपोर्ट आएकै रहेनछ । शनिबार मात्र ति संक्रमितको रिपोर्ट आएको रहेछ र उनी कोरोना भाईरस पोजेटिभ भएका रहेछन् । यस विषयमा जानकारी लिन माई नगरपालिकाका प्रमुख दिपक थेवेलाई पटक पटक सम्पर्क गर्दा थेवेले फोन उठाएनन् ।
Tags: CDO_IlamDipak ThebeGreenIlamIlamIlamGreen
इलाम सदरमुकाममा हुर्कियो दुई बोट जिङ्गो बिलोबा, संरक्षणमा चुनौती